Wasiir Axmed Cawad 2 Sano iyo bar fadeexooyin musuqmaasuq iyo wax is daba marin aad u baahsan oo uu kukacay. – XAMAR POST
Wasiir Axmed Cawad 2 Sano iyo bar fadeexooyin musuqmaasuq iyo wax is daba marin aad u baahsan oo uu kukacay
By Mohamed Ahmed On Aug 15, 2020
Wasiir Axmed Cawad oo ceeb iyo fadeexad kala tagi doona Wassaraadii uu soo maamulayay 2di Sano iyo barkii u dambeeyey.
Waxaa si isdaba joog ah usoo ifbaxaya fadeexooyin musuqmaasuq iyo wax is daba marin aad u baahsan oo uu kukacay sii hayaha xilka Wasiirka Arrimaaha Dibadda Axmed Ciise Cawad muddadii uu Wasiirka ahaa illaa haddana sii wada isagoo noqday, Wasiirkii ugu tayada xumaa uguna liitay ee Soomara taariikhda Wasaaradda si buuxdana u baabi,iyay haykalkii qaab dhismeedkii iyo tayadii shaqo ee Wasaaradda.
Wasiir Cawad waa nin ku caan baxay musuqmaasuq, qabyaalad iyo eex aan geed loogu gaban, isagoo ka caada dhigtay laaluush qaadasho & tahriibinta dadka si uu u sameeyo lacag badan mudada uu xilka hayay.
Axmed Ciise waa Wasiirkii u horreeya taariikhda ee magacowda qof uqaabilsan arrimaha tahriibka & iibinta fiisooyinka dadka usocda dalalka Turkiga, Yurub & Maraykanka, iyo dadka loo magacaabo Safaaradaha dibadda oo la sheegay in laga qaato lacago aad u farabadan, kaasoo ah wiil uu adeer uyahay oo magiciisa lugu sheegay (Suhayr).
Suhayr wuxuu caan ka yahay khaatirna ka taagan Safaaradda Turkiga ee Soomaaliya oo maalin walba uu geeyo tobanaan Baasaboor oo shacab ah oo dadkoodi laga soo qaatay lacago u dhaxeya 4000-6000 dollar midkiiba, Wasiirka Cawad Ayaana si toos ah uga codsatay Safaaradda inay kala shaqeeyaan wiilkaas wixii khuseeya Arrimaha Fiisooyinka iyo dadka Turkiga loogu dirayo daawayn Caafimaad.
Waxaa kale iyadana shaqa taas kasii khatar badan qabata qof haweeney ah oo waliba da,a ah taasoo dagan Gurira Cawad luguna sheegay magaceeda Maryan Curubo oo ah islaantii ka dambaysay musuqmaasuqii iyo dambiyadii uu horay uga gaystay Cawad USA mudadii uu Safiirka ka ahaa halkaas. Waxaan wada xasuusanaa sidii foosha xumayd ee uu ula dhaqmay Axmed Cawad maxaabiistii & Jaaliyadda Soomaaliyeed Maraykanka mudadii koobnayd ee Safiirka ka ahaa Wadankaas.
Raisulwasasrihii hore Mudane Xasan Cali Khayre oo islamarkiiba ogaaday musuqmaasuqa, qabyaaladda iyo Tayo xumada Axmed Cawad iyo inuusan uqalmin inuu sii ahaado Wasiirka Arrima dibadda ayaa dhowr jeer go,aansaday inuu xilka kaqaado, isagoona u gudbiyay madaxwaynaha arrintiisa iyo waxa uu ka shaqeeyo, laakiin nasiib darro Madaxweynaha oo ay isku beelyihiin ayaa is hortaagay oo ka diiday in xilka laga qaado.
Wasiirki hore Axmed Cawad isagoo ku gabanaya inuu xoojinayo tayada shaqada Wasaaradda wuxuu Hay,adaha UN,ka iyo kuwa caalamiga ah ee dalka joogaa ka shaqaalaysiistay dad uu ku sheegay inay u yihiin lataliyayaal Wasaaradda kuwaas oo tira ahaan ka badan 10 ruux oo kan ugu yar la siiyo lacag dhan $5000 hal meel ama dhowr meelood oo kala duwan, dadkaas dhamaantood waa reerkiina hoose qaarkoodna dalkaba ma joogtaan . Waxaana xusid mudan in ay leedahay Wasaaraddu lataliyayaal rasmi oo kasoo shaqaynayay muddo dheer, Wasiir cawadse uu cagta ayuu kudhuftay sharcigi uyaalay Wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Cawad wuxuu waaxda Maamulka iyo maaliyadda ee Wasaaradda u magacowday nin uu abti u yahay oo magaciisa lagu sheegay Saacid Aadan shaqaalaha rasmiga ahna aan kamid ahayn kaasoo uxada una qariya lacagaha Wasaaradda bil kastana account gaar ah ugu shuba Cawad lacag ka badan $80,000 dollar oo ah running castiga Wasaaradda
Iyo lacago kale oo farabadan oo laga helo Safaarado Ajanabi ah.
Saacid wuxu hadda dhamaystiray gurigii labaad oo Cawad uu uga dhisayo Magaalada Garoowe isna mid buu ka dhistay isla Garoowe taasoo ah wax la wada og yahay, oo aan kaqarsoonayn inta badan dadka yaqaano Cawad & Saacid.
Wasiir Cawad wuxuu si sharci darro qaawan ah Garoowe uga furay Qunsuliyad Guud oo Wasaaradda Arrimaha Dibadda ah, isagoona halkaas geeyay TIIMBARIHI (Stamp) ka Wasaaradda madaxna uga digay nin uu banaanka kasoo qortay oo uu adeer hoose u yahay, Qunduliyadaas sharci darrada ah waxay hadda qabtaa dhammaan shaqooyinki ay lahayd Wasaaradda Arrimaha Dibadda oo xitaa ay ku jiraan la xiriirida dowlaha iyo safaaradaha Ajanabiga ah.
Akhlaaq ahaan Cawad waa nin ku caan baxay xumaan, tumasho, iyo fisqi, isagoo markuu dalka joogo gurigiisu yahay meel toddobaad kasta dhowr jeer lugu qabto wax lugu sheego Party laakiin dhab ahaanti ah tumasho iyo qoob kaciyaar lugu wax-yeeleeyo gabdha yar yar oo Soomaaliyeed oo lasoo qalday ayna ku baxdo dhowr boqol oo dollar habeen walbo, lacagahaas oo laga musuqmaasuqo Wasaaradda.
Cawad Wuxuu si sharci darro ah ugu magacaabay Agaasimayaal aan waligood xafiis dowladeed ka kasoo shaqyan, wax khibrad iyo aqoon maamul ahna lahayn, isagoo meesha ka saaray dadkii khibradda diblomasiyadeed lahaa ee horay u joogay Wasaaradda kuwaas oo isugu jira Safiiro waayo arag ah, xoghayaal joogta ah, Agaasimayaal iyo Shaqaale kaleba.
Cawad wuxuu intii uu xafiiska joogay magacaabay in ka badan 80 diblomaasi oo intooda badan ay yihiin qaraabadiisa iyo qaar laga qaatay lacago badan oo u dhaxaysa $15, 000 $5000 dollar dhamaantoodna bannaanka Wasaaradda iyo suuqa laga wada qoray waligoodna aan dowlad u shaqayn.
Diblomaasiyiintas la magacaabay wax yar mooyee dhammaantood waa isku darajo oo waa lataliyayaal koowaad ( first couselars) ama kuxigeen Safiir taasoo muujinaysa in dadkaas laga iibsaday boosaskaas.
Kusime Wasiir Axmed Ciise Cawad waa damiirlaawe galay dambiyo aad foolxun, wuxuuna dareensan yahay in hadda lawada bartay oo aan xil dambe cidna ku aamini doonin, sidaa darteed wuxuu go,aansaday inuu sii gacan mariyo wixii uu gacan marin karo horayna u cararo.
Haddaba, hadii ay jirto dowlad Soomaaliyeed oo danaynaysa inay wax kaqabato Musuqmaasuqa baahsan ee kasocda xafiisyada dowladda, waa in lagula xisaabtamaa Axmed Cawad , dhibaatooyinki uu ka gaysatay Wasaaradda, sharcigana la mariyo, isaga iyo kuwa la midka ah ee hunguriga wax ka arkana aan dib dambe loogu dhiibin xil Ummadeed.
Qore. Muudey Abiikar Yalaxow